PressReader - Ilanga: 2017-09-07 - Ikhwezi ligqama esibhakabhakeni
Ikhwezi ligqama esibhakabhakeni
Ilanga - 2017-09-07 - Izindaba - OKUQAPHELEKAYO NGEKHWEZI (VENUS) IZIGABA UGQAMANGABANYE (TRANSIT)
Siyiqhuba kweyangeledlule UMA ubheka ngeso lenyama, iKhwezi libonakala njengechashazi elimhlophe elikhanyayo, eligqame ukwedlula yonke imihlaba nezinkanyezi - ngaphandle kweLanga - uma ulibuka useMhlabeni.
Ukukhanya kwalo kwenza ukwazi ukulibona ngisho emini kwa'bha' uma izulu lingaguqubele, kodwa libonakala kahle uma iLa-nga seliya ngomutsha wendoda noma liphuma.
IKhwezi lintininiza (126,077 km/h - isivinini somzungezo kanti esokuphenduka silinganiselwa e-1,669.8 km/h) lidlule uMhlaba (108,000 km/h - isivinini somzungezo kanti esokuphenduka silinganiselwa e-1600 km/h ) njalo emuva kwezinsuku ezingama-584 uma kuzungezwa iLanga.
Njengoba kusuke kudlulwana nje, iKhwezi liyashintsha lingabe lisabonakala ntambama kodwa libonakale ekuseni. Njengoba iKhwezi ligqame kakhulu esibhakabhakeni, kwesinye isikhathi abanye bayaye bacabange ukuthi wumantininiza ( unidentified flying object).
Njengoba lisuke lizungeza iLanga, iKhwezi liye likhombise izigaba ezifuze ezeNyanga uma libukwa ngomabonemajukujukwini ( telescope).
IKhwezi libukeka liyicwecwe elincane kodwa elingelona ucezu - njengenyanga esuke isethwasa - uma kuwubhekanabuswenibuqama ( superior conjunction) lapho iLanga livela sengathi liphakathi neKhwezi noMhlaba.
Uma kuwubhekananhlangothikhaxa ( maximum conjunction), liseceleni kweLanga, iKhwezi livela liyicwecwe ( disc) elikhulu eliwucezu - kulesi sigaba liye livele esibhakabhakeni li- khanya kakhulu ebusuku uma kuqhathaniswa nakwezinye izigaba. Liye libonakale liwucezu oluncane uma libhekwa ngomabonemajukujukwini ngesikhathi liyodlula ohlangothini libhekene phakathi koMhlaba neLanga. Liye likhombise “ukuzalwa kabusha” ligcwale, libonakale lilikhulu uma sekuwubhekanabusweninganeno ( inferior conjunction).
Ugqamangabanye - lapho isakhiwomkhathi ( celestial object) esincane sivela sengathi sibonakala ebusweni besinye (isakhiwomkhathi) esikhulu - weKhwezi, wenzeka lapho ubhekanabusweninganeno walo uqondana nesikhathi lisemzileni okuzungeza kuwona uMhlaba.
Wenzeka izikhawu ezine eminyakeni engama-243. Njengamanje wenzeka kabili eminyakeni eyisi-8 bese uhlaba ikhefu iminyaka eli105.5 noma eli-121.5 - okuwumkhu- ba oqale ukubonwa ngowe-1639 ngusonkanyezi wase-England, uJeremiah Horrocks. Owakamuva wenzeke mhla ziyisi-8 kuNhlangulana (June) wezi-2004 namhla ziyisi-5-8 kuNhlangulana wezi-2012. Ugqamangabanye weKhwezi lo, uyabonakala uma usebenzisa umabonemajukujukwini wakho osezingeni eliphezulu futhi nesimo sezulu sisihle.
Owangowezi-2008 nowezi-2012 wandulelwe ngowangoZibandlela (December) we-1874 nowangoZibandlela we-1882. Olandelayo uzokuba ngoZibandlela wezi-2117 nangoZibandlela wezi-2125.
Ngokomlando, ongqamangabanye beKhwezi bebebalulekile ngoba bebesiza osonkanyezi ukuthola ibanga phakathi kwezakhiwomkhathi ngokwe- astronomical unit (AU). Sizoyiqhuba ngokuzayo. Umthombo ngabe: en.wikipedia.org
ISITHOMBE NGABE: BLOGSPOT.COM
UBHEKANABUSWENIBUQAMA owenzeka phakathi kweKhwezi, yiNyanga noMhlaba.
ISITHOMBE NGABE: DARKERVIEW.COM
LO mdwebo ukhombisa ukwenzeka kukabhekanabuswenibuqama ( wubhekanabusweninganeno ( nobhekananhlangothikhaxa (
ISITHOMBE NGABE: PENNLIVE.COM
LAPHA sibona ugqamangabanye ( elibonakala liyichashaza elimnyama elangeni. weKhwezi